Ihe ọ drinkụ drinkụ na Holland | Njem zuru oke
Anyị niile kwenyere na ọ bụrụ na anyị na-eche Holland, anyị na-eche Heineken biya. O doro anya na ọ bụghị naanị ihe a thatụrụma ma ọ bụ nwere ike ị drinkụ gburugburu ebe a. Echere m, e nwere ọtụtụ ihe karịa Heineken na ọtụtụ ihe karịa biya n'ozuzu ya. Ma mgbe ahụ, Kedu ka ihe ọ theụ theụ dị na Holland?
Anyị ga-ekwu maka nke ahụ taa, nke bụ ihe ọ drinksụ drinksụ na-ewu ewu na nke kachasị ewu ewu na Holland, iji nwee ndepụta nke ihe anyị nwere ike ịnwale mgbe anyị na-aga ebe ahụ, njedebe nke ọrịa a site na.
1 Holland na ihe ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala ya
2 Beer na Holland
6 Lee gi munt
8 Onye ndụmọdụ
Holland na ihe ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala ya
Na ụkpụrụ, ị ga-ama nke ahụ ọtụtụ ndị Dutch omenala ọ containụ containụ nwere mmanya na na mgbe ụfọdụ ọ bụghị ha niile nwere ezigbo obi uto ma ọ bụ ihe ekwuru, mara mma. Banyere afọ ị drinkingụ mmanya ebe a ị nwere ike ị drinkụ biya na mmanya si na 16 na ihe ọ strongerụ drinksụ ndị siri ike site na afọ 18.
Banyere ihe ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala anyị na-agụ biya, koffie verkeed, tea mint ma ọ bụ amaokwu, jenever liqueur na ndị ama ama ama ama Dutch, chocomel, advocaat nwere brandi, kopstoot, korenwijn ...
Beer na Holland
Brandsdị abụọ kachasị ewu ewu ebe a bụ Heineken na Amstel ọ bụ ezie na ndị obodo ahụ na-arịọ maka ha site na ịsị "pils" ma ọ bụ "biertje". Ọ bụ maka biya icha mmirimmiri na ha bụ ndị ama ama, mana ọ bụkwa eziokwu na ndị Dutch na-ekpori ndụ omenala beers dị ka bokbier ma ọ bụ witbier.
Nke mbụ bụ biya pụrụ iche emere na mmiri na udu mmiri na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Nri ahụ dị iche na oge abụọ nke afọ, ma na-agbasikwu ike ma na-anọkarị na mgbụsị akwụkwọ. Yabụ, ọ bụrụ na ị gaa Amsterdam mgbe epupụta daa, ị nwere ike ịga ememme Bobkier wee nwalee ya.
Aụ biya ndị ọzọ, biya biya, nwere mmanya na-esi ísì ụtọ ma dị ụtọ, mana ọ dị ọhụrụ. Na Netherlands, a na-ejikarị ya na lemon na arịa iji kpochapụ ya na ala nke iko ahụ ma si otú ahụ mee ka ọ dị ọhụrụ na acidity.
Ọzọkwa enwere oge mgbe a na-enye biya biya na ngwakọta ahihias, 'gruit', ejiri ọtụtụ narị afọ gara aga wee nyere aka chekwa biya mgbe amabaghị na hops dị. Nwere ike ịtụrụ ụdị dịgasị iche iche na Jopen na Haarlem, dịka ọmụmaatụ.
Nke bụ eziokwu bụ na taa enwere ọtụtụ ebe ị na-eme biya nke na-enye ọtụtụ biya beers. Nwere ike ịga na Ogwe ma ọ bụ ị nwere ike ịga ụfọdụ ụlọ ọrụ biya.
Ọ dị mma, ihe ọ thisụ thisụ a nwere aha ụmụaka mana ebe a onye ọ bụla na-eri ya otu. N'ụbọchị oyi, ọ na-abụkarị ịrịọ maka chocomel, aha azụmahịa kachasị ewu ewu nke a chọkọletị na-ekpo ọkụ ma na-akasi obi.
Enwere ọbụna igwe na-ere ere maka Chocomel na ụfọdụ ụlọ ahịa na ụlọ mmanya, a na-ere ya na nnukwu ụlọ ahịa yana n'ụlọ ahịa nri yana enwere ọtụtụ nke gụnyere chocolate gbara ọchịchịrị, yana ude ma ọ bụ mmiri ara ehi skimmed.
Ebumnuche ika a bụ "de enige échte", ihe dịka Onye mbu na onye ozo. O doro anya na e nwere ụzọ ndị ọzọ, Tony Chocolonely mmiri ara ehi nke ị nwekwara ike ịzụta na Netherlands niile, ọkachasị n'ụlọ ahịa na-ere ngwaahịa ngwaahịa.
Holland nwere ọtụtụ mmụọ na otu n'ime ndị kasị ewu ewu na Amsterdam bụ Wynand Fockink mmanya. Ihe ọquụquụ ọzọ a ma ama bụ T Nieuwe Diep. Eziokwu bụ na mmanya na-ewu ewu na Holland kemgbe narị afọ nke iri na asaa, oge ọla edo nke ala ndị a, oge naanị ndị kacha baa ọgaranya nwere ike ị affordụ mmanya na-egbu site na shuga, ngwa nri na mkpụrụ osisi.
N'oge ahụ, ndị kasị daa ogbenye, ndị nkịtị, na-a onlyụ naanị biya ma ọ bụ jenever, ma enweghị ike ị liụ mmanya. Kemgbe ahụ, mmanya jere ozi na obere iko tulip Ha juputara na njedebe, ya mere, ọ gaghị ehulata ma kpachara anya. A na-ekwu na a na-ejere ya ozi otu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ jubiga ókè, n'ihi na ndị ahịa Dutch kwuru na ha jupụtara ego ha, ka, biko, rue elu ihe nile.
A na-eme mmanya ndị Dutch na-a byụ site na ịtinye ngwa nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi, ma ọ bụ ha abụọ, na ihe ọ theụ distụ na-aba n'anya nke nwere ike ịbụ vodka ma ọ bụ jenever. A na-agbakwunye shuga, a ga-ahapụ ngwakọta ahụ ka ọ ghaa ma ọ dịkarịa ala otu ọnwa na nsonaazụ ya bụ mmiri mmiri na-atọ ụtọ nke nwere ekpomeekpo siri ike ma doo anya, yana mmanya na-egbu egbu nke ukwuu.
Otu n'ime ihe ụtọ mmanya na-ewu ewu na 'duindoor', nke oroma oroma toro na dunes nke North Sea. Ọzọkwa e nwere mmanya ogbugbu na udara ma ọ bụ lemon, dị ka kpochapụwo Italiantali a maara dị ka lemoncello.
N'elu, n'oge a na-ekwu maka mmanya, anyị kwuru maka jenever, Ntughari Dutch nke gin gin. Akụkọ ihe mere eme na-ekwu na ndị agha Dutch bibiri jenever n'oge agha dị n'etiti Spain na England na 1630. Ha chere na ha drankụrụ mmanya tupu agha ahụ ma soro ndị England ha na ha jikọrọ aka kesaa ya.
Mgbe ndị agha bekee lọghachiri n’obodo ha ha wetara akwụkwọ nri maka “Dutch Courage”, ebe o mere baptizim. Ha enweghi ihe ịga nke ọma, ekpomeekpo ahụ agbanweghị otu na mbụ, ya mere, ha tinyere ụfọdụ ahịhịa na uda iji mee ka ọ “drinkụ” ma ọ bụ ebe a ka ọdịiche dị n’etiti ahịhịa bekee na gin jenever si.
Onye nwere ike A na-eme ya site na ịkọcha ọka na jupụta na mkpụrụ osisi junipa, na mgbe ụfọdụ ụfọdụ ụdị ndị a na-eji eme mmanya. Dika eji eji ọdụ ụgbọ mmiri nke Rotterdam ebubata ọka na mpaghara niile gbara gburugburu, dịka ọmụmaatụ, mpaghara Schiedam juputara na ihe ntụgharị jenever ma ka nwere ike ihu taa.
Enwere ụdị dị iche iche nke jenever: oude na jonge. Ihe dị iche anaghị adaba n'oge a hapụrụ ha ka ha jiri macerate mana na nhazi ha. A na-eji Jenever oude mee ihe eji esi nri ochie, ebe jonge bụ ụdị ọhụụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere akụkọ a, ị nwere ike ịga na Slọ Bols na Amsterdam, ma ọ bụ Jenever Museum, na Schiedam.
Lee gi munt
Anyị na-apụ mmanya na-aba n'anya ntakịrị ma gaa tii. Nke a bụ ohuru mint nke bụ omenala na Holland ma na-a isụbiga mmanya ókè n'akụkụ ọ bụla nke Amsterdam. A na-etinye tii n’otu iko iko ma ọ bụ nnukwu iko, ya na mmiri ọkụ na mkpịsị akwụkwọ tii ọhụrụ.
Nwere ike tinye mmanụ a honeyụ na lemon mpekere na ọ bụ a Mkpa ọkụ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eche dị ka kọfị ma ọ bụ na ị chọrọ ihe ọzọ digestive.
Site na tii gaa na kọfị, ọ bụ naanị otu nzọụkwụ. Ọ bụrụ na-amasị gị Nchikota kọfị na mmiri ara ehi mgbe ahụ kọfị Dutch a bụ nke gị. Ọ bụ nsụgharị Dutch nke kpochapụwo caffè latte ma ọ bụ cafe au lait ma ọ bụ kọfị na mmiri ara ehi. Kọfị na-ekpo ọkụ na mmiri ara ehi a na-ejikarị espresso eme ihe dị ka ntọala nke a na-agbakwunye mmiri ara ehi na-eme ka ọ bụrụ ụfụfụ. A obi ụtọ
Aha ahụ, koffie verkeerd, pụtara kọfị na-ezighi eziN'ihi na kọfị nkịtị enweghị ntakịrị mmiri ara ehi. Ihe a na-emebu bụ ịtụ ụdị a n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie, ebe enwere ndị na-a itụ ya ilu, ndị ọzọ na-agbakwunye shuga shuga. Na kọfị ma ọ bụ ụlọ mmanya ọ na-eji kuki ma ọ bụ kuki dị ka ihe nkwado.
Anyị na-alaghachi n’ihe ọholicụ alcoụ na-aba n’anya. A na-eme ihe ọ drinkụ drinkụ a àkwá, shuga na brandi. Ihe si na ya pụta bụ ihe ọ drinkụ aụ ọla edo nke na-eje ozi dị ka isi maka ịme ọtụtụ mmanya na desserts.
Otu n'ime mmanya a kacha mara amara nke ejiri advocaat mee bụ Snowball: ebe ọkara na ọkara agwakọtara ya na lemonade. Ee, a na-arụkwa otu ihe ahụ na England, mana ebe a na Holland a na-ejikarị flake nke ude mmịrị na koko ntụ.
Okwu a, advocaat, pụtara onye ọka iwu ọ bụghị ihe ndabara. Akụkọ dị n’azụ ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ na-egosi na ejiri advocaat ma ọ bụ advocatenborrel mee ihe maka ndị ga-ekwu okwu n’ihu ọha tupu ha etee akpịrị ha. Onye na-ekwu okwu n’ihu ọha? Ndị ọkàiwu.
Ihe ọ drinkụ drinkụ a dị na ụlọ ahịa mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ụlọ mmanya Dutch ọ bụla, ọbụlagodi na ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ụlọ ahịa. Ghara inwe mgbagwoju anya na jenever. A na-eme ihe ọ drinkụ drinkụ a site na ọka, mana n'adịghị ka jenever nke na-eji mkpụrụ osisi junipa, mkpụrụ osisi ndị ahụ anọghị ebe a. Yabụ, uto ahụ dị nnọọ iche.
Ke ofụri ofụri, na korenwijn eji nri ọdịnala Dutch mee ihe, Dịka ọmụmaatụ, ya azụ asa (Azụ nri).
Enwere ike iji ya tụnyere onye na-esi esi esi Bekee. A na-enye iko iko abụọ, otu biya na otu jenever. Nke mbụ, a na-egbu jenever na mmanya, na otu biya iji mee ka nke mbụ kwụsị.
Fun na ufiop na nnọọ Dutch, ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta a 100% ahụmahụ mba.
Ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ihe ọ drinkụ orangeụ oroma pụtara n’ememe obodo, dị ka ụbọchị Eze ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ ma ọ bụ ụbọchị nnwere onwe. Ọ bụ a mmanya siri ike, na mmanya 30%, ma na-arụ ọrụ na a shot.
Ndi oranjebitter ọ dị ilu ma sie ike, emere ya na brandi, oroma na peeli oroma. O yitere mmanya oroma a ma ama ma mmanya ogbugbu nwere shuga na ya. Ekwesiri ikwu na taa ọtụtụ karama Oranjbitter nwere shuga, yabụ na ọ dịkwaghị soooo ilu.
Ọ bụ ezie na o nwere aha French, ihe ọ theụ drinkụ ahụ bụ Dutch. Ọ bụ mmanya, Dutch version nke kpochapụwo cognac. A na-akpọbu ya otu ihe ahụ nwanne ya nwoke France, mana na 60s ụdị nke French nwetara aha mmalite ya wee gbanwee aha ahụ.
Ihe ọ drinkụ drinkụ na-ewu ewu bụ ịgwakọta ya na Coca-Cola, ọ bụ ezie na anyị agaghị echefu nke ahụ mmanya na-egbu ya, ihe dị ka 35%. Ihe ọ liụ liụ siri ike karị bụ Goldstrike, na mmanya na-aba n'anya nke 50%.
Ruo ugbu a, ụfọdụ n'ime mmanya na Holland mana n'ezie, enwere ọtụtụ. Na njem ọzọ gị na Netherlands, na-eyi nchebe imeju na…. inwe!
GastronomyOge ntụrụndụLọ oriri na ọụụ na Ogwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ihe ọ drinkụ drinkụ na Holland
Kedu ihe bụ ngwa nri kachasị eji na India?